2018 – REDPlayer
New Game Play from Anthem By Play4games
Microsoft မှ Mobile အတွက် Xbox ပုံစံ controller
မကြာခင်ကပဲ Microsoft research ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ စာတမ်းတွေအရ Xbox ပုံစံ controller လက်ကိုင် တစ်မျိုးကို Micorsoft အနေနဲ့ဖုန်းတွေအတွက် ထုတ်လုပ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Windows Central မှာရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုအရတော့ ဒီစာတမ်းတွေကအခုမှထုတ်ပြတယ် ဆိုပေမယ့် 2012-2014 လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးသားလို့ပြောပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း mobile gaming မှာ touch နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွက် တစ်ချို့ အချိန်တွေမှာ control ပိုင်းအနေနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေကြုံရပါတယ်။ portable controller တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့…
Diablo III: Eternal Collection – announcement trailer (Nintendo Switch)
POTC အသစ်မှာ Jack Sparrow မပါတော့
Pirates of the Caribbean (POTC) က Disney ထုတ်လုပ်တဲ့ထဲက သက်တမ်းရှည်ရှည်နဲ့ပေါက်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ လူကြီးတွေကနေ ကလေးတွေအထိ အမှတ်တရရှိနေတဲ့ မင်းသားကြီး Johnny Depp ရဲ့ဇာတ်ကောင် Captain Jack Sparrow ကြောင့်လည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အသစ်ပြန်ရိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့ POTC reboot မှာတော့ Johnny Depp မပါတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ လာမယ့် ၆ခုမြောက် ရုပ်ရှင်မှာတော့ သူတို့သွားမယ့် လမ်းကြောင်းအရ ထည့်သွင်း အသုံးမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းဆရာ အနေနဲ့ကတော့ POTC:…
လက်ရှိ game တွေဆော့ရတာပျော်တယ်မဟုတ်လား၊ အရင်ကတော့ PC မှာ.. ပြီးတော့ PS နဲ့ Xbox ပေါ့။. အခုနှစ်တွေမှာရော? Mobile gaming ဆိုတဲ့ ကိစ္စကအတော်လေးနေရာယူလာပါတယ်။ ကစားဖြစ်တာပဲမဟုတ်လား … ဆိုပါတော့ MMORPG ပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး အချိန်ဖြုန်းတဲ့ arcade racing လေးပဲဖြစ်ဖြစ် တော့ဖုန်းထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ tablet ထဲမှာလည်း game အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဆော့လည်းဆော့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ညနေအိမ်ပြန်တိုင်းမှာ ဘာလို့ PC game တွေဆက်ဆော့နေသေးတာလဲ။. Xbox…